Indawo yokucasha yase-Wisconsin Summer Lakefront e-Hatfield WI!
Merrillan, Wisconsin, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Hans
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Hans izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Uzoyithanda le Wisconsin Lakefront Hideout e-Hatfield WI! Ikhaya lethu echibini (igumbi lokulala eli-4/igumbi lokugezela eli-2/ukulala kufika ku-13) linokubukwa okuhle, indawo nokuma kwendawo. Ilungele imindeni/izingane, izithandani, abathanda uhambo, indawo yokuhlala yesikhathi esifushane/eside yama-ATV'ers namaqembu amakhulu. Amathani okudoba okujabulisayo kwasehlobo, ukubhukuda, ukuhamba ngesikebhe, ukugibela izintaba +5 imigoqo yendawo nezindawo zokudlela! Uzoba namadekhi angu-2, idokhi nolwandle oluyimfihlo olungaphambi kwechibi. Ngezibuyekezo ezingaphezu kwe-100 kusukela savula iminyango yethu, izinkanyezi ezi-5 eziningi, isilinganiso sethu sifinyelele izinkanyezi ezingu-4.7.
Wena nomndeni wakho, izivakashi noma iqembu nizoba nesikhathi esimnandi lapha! Kuyindawo yezimanga yokhuni, lapho izinyamazane zivame ukuhamba otshanini ngemva kwendlu. Indlu ihlezi endaweni enhle kakhulu, ethule ehlathini, ikhilomitha elilodwa nje ukusuka edolobheni elincane laseHatfield, lapho ungathenga khona izinto nezinkuni.
Sinedokhi yangasese ongayibophela phansi iye phansi ngasolwandle lwethu.
Futhi nje imizuzu engu-20 ukusuka edolobheni elikhulu iBlack River Falls (BRF), inani labantu abayizi-15,000, elikhuthaze enye yezindaba ezimfushane zikaStephen King encwadini yakhe, "Full Dark, No Stars" (cishe ngo-BRF 1922).
Wena nomndeni wakho, izivakashi noma iqembu nizoba nesikhathi esimnandi lapha! Yindawo engakholeki ehlobo nasekwindla, kanye nonyaka wonke. Izihlahla ziba nemibala emangalisayo ekwindla, futhi kukhona ukudoba okuhle echibini nasezikhungweni zethu zemikhumbi noma ogwini lwama-160'. Indawo ephelele yokubalekela konke! I-Hatfield inezindawo zokuphuzela/izindawo zokudlela ezi-4 ezihlukene, inkundla enkulu yokukhempa, indawo yokuphuzela utshwala nezimakethe ezimbalwa ngoSuku lweSikhumbuzo, mhla zizi-4 kuJulayi kanye noSuku Lwabasebenzi. I-pizza ehamba phambili endaweni itholakala e-Mug, ephinde isingathe i-Taco ngoLwesibili nge-taco pizza kanye ne-taco bar. I-Stones Throw inezinhlanzi ezihamba phambili zangoLwesihlanu ezihamba ngamamayela!
Kunedokhi ongadoba kulo, noma ukubopha isikebhe sakho samaphononi, isikebhe sokushushuluza noma isikebhe sokudoba.
I-160' shoreline inesihlabathi esingamamitha angu-30 kanye nolwandle lwamatshe, futhi ukubhukuda kuhle njengoba umbhede wechibi ungamatshe nesihlabathi.
Kukhona itafula lepikiniki, amadekhi ama-2, Igedlela le-Weber kanye nefenisha yasengadini. Kukhona nendawo yokucima umlilo eduze nogu.
Sicela uqaphele futhi usebenzise ingqondo lapho ubhukuda, ugibela isikebhe noma usebenzisa indlu namagceke. Izingane kufanele zihlale zigadiwe, futhi zigqoke izinto zokuntanta lapho zibhukuda noma zihamba ngesikebhe. Yiba nomthwalo wemfanelo futhi ujabulele i-Wisconsinably!
Ekwindla, izihlahla ziyimibalabala futhi zinhle. Indawo enhle kangaka. Yindlu enkulu yechibi ngemuva, ngisho nasebusika.
Lena indawo enhle ngempela yokuphumula, ukuzijabulisa okuthile futhi ubalekele kukho konke!
Ngifisa ukukubona maduze!
Le ndawo inezindlela ezinhle zokuqwala izintaba nokuningi okumelwe ukwenze endaweni.
I-Jackson ne-Clark Counties ineminye yezindlela ezihamba phambili zokuhamba izintaba kanye ne-ATV e-Midwest.
Uzoyithanda ngempela le ndawo. Inekhishi elihle kanye nesiqhingi sasekhishini esikhulu esilungele ukudla ndawonye, ukudlala imidlalo namakhadi, ukusebenza nokudlala kumakhompyutha aphathekayo, njll., nezindawo eziningi zokuphehla amandla ekugcineni ngakunye. Amaqembu ahlala endaweni yethu alithanda ngempela ikhishi lethu lepulani elivulekile nendawo yokuhlala!
Ngekhabethe laseNorth Woods echibini elihle - indawo yethu iyibhomu. Ngokubuyekezwa okungaphezu kwe-100 nezilinganiso zezinkanyezi ezingu-4.7, awukwazi ukungahambi kahle!
Futhi, imibala Yekwindla/Yekwindla iyamangalisa kusukela maphakathi noSepthemba kuya ekupheleni kuka-Okthoba.
Indawo inkulu kangangokuba inesikhala esiningi sokuthi izingane zigijime zizungeza, futhi inkatho ihlala ngqo echibini elinezinyawo eziyi-120 zogu logu, futhi idokhu lizobe selingenile futhi selilungile ngesikhathi ufika lapho. Ehlobo, ungakwazi ukubhukuda, ukudoba, ukushushuluza emanzini noma ngesikebhe usuka esikhumulweni semikhumbi. Ichibi lingamatshe ayindilinga namatshe, awekho amatshe amagebhugebhu. Uma ufika ngo-Agasti, amanzi azoba mahle ngempela futhi afudumele ezemidlalo zokubhukuda nezamanzi. Kunamadekhi angu-2, enkulu ngempela ngemva kwendlu, ene-grill enkulu ye-Weber kettle kanye netafula lepikiniki, elinetafula nezihlalo ezi-4. Kukhona nedokodo elincane ngasemanzini elibheke ogwini, ichweba kanye nechibi. Ngezinye izikhathi amaqembu ahambisa itafula nezihlalo ukusuka esikhumulweni semikhumbi esikhulu ukuya endaweni encane. Idokhi elincane liyindawo ekahle yokuhlala ngaphezu kolwandle futhi ubuke ichibi, futhi nokuba nesidlo sasekuseni esimnandi noma isidlo sasemini.
Uma uhlezi endaweni yokucima umlilo, ungabona idokodo nechibi. Kukhona nedekhi yesibili encane ebukeka phezu kwechibi kanye nolwandle.
Zombili ziphakanyiswe cishe ngamamitha angu-15 ngaphezu kwamanzi, ngakho-ke unokubukwa okuhle echibini, idokhi kanye nolwandle.
Futhi ukushona kwelanga okuhle phezu kwamanzi kungabonakala ehlobo, indlu kanye nenkatho kufanele ibhekane ngokuphelele nentshonalanga. Kusukela ogwini, ungabona ilanga lishona ekupheleni kwechibi phezu kwamanzi.
Kukhona nendawo yokucima umlilo futhi kufanele kube nezinkuni ezanele ezilele emahlathini. Kukhulu, kunesikhala esiningi semidlalo yangaphandle noma isikhala sokujikijela ibhola noma uFrisbee.
4.68(144 okushiwo abanye)
Umakhelwane uceceke kakhulu, uthule futhi unokuthula, omakhelwane bahle kakhulu.
Uma udinga usizo ngesikhathi uhlala, ungathintana nomgcini wendawo noma ungithinte ngokuqondile ngomakhalekhukhwini noma ngombhalo. Ngeke ngitholakale mathupha, kodwa umgcini wendawo ungowasendaweni futhi angathintwa ngocingo uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Merrillan namaphethelo